Izinwele zezinwele zabafana besimanje | Amadoda aSitayela
Izinwele zezinwele zabafana besimanje
Sithanda ukwazi ukuthi ziyini izitayela zezinwele ezisethrethayo, ngoba sifuna ukwazi okugqama kakhulu futhi kwakamuva ngemfashini. Kubo bonke labo bafana besimanje abathanda ukwenza isitayela salezi zinwele banamuhla kakhulu futhi bakha lokho kubukeka kwamanje.
Uma into yakho ukugqoka izinwele ezimfushane, sizokukhombisa izitayela ezinhle kakhulu futhi sikunikeze lobo buntu noma ushintsho oludingayo. Siyazi ukuthi ukunikeza umbono omuhle kakhulu ngaso sonke isikhathi kuhle ukunikela kancane kwi-intuition yakho bese uthola yiluphi uhlobo lokusika oludinga ukwakheka kobuso bakho.
1 Izinwele zabafana zesimanje
1.1 Ukusika okuhlanzekile nokuqoqekile
1.2 Izinwele ezinama-messy
1.4 Ukufiphala kwethempeli
1.5 I-Low Fade noma i-Mid Fade
1.6 I-Afro Fade
1.7 Izinwele zezinwele ezisontekile
Izinwele zabafana zesimanje
Ngenkathi ngayinye sinezitayela ezahlukene nezinwele ezingaguqulwa kubuntu bethu. Kumele senze ukukhetha okuhle kakhulu futhi sazi ukuthi yini engangena. Izinhlobo zethu zokugunda izinwele zesimanje futhi zamanje kangangokuba zinamagama azo:
Ukusika okuhlanzekile nokuqoqekile
Iningi lokusikeka kuseyizinto zakudala futhi akumele sikhohlwe ukuthi okuhle kunakho konke njalo lowo onikeza lokho kubonakala kuhlanzekile futhi kucocekile. Ukusikeka okujwayelekile ngokuhlukaniswa ohlangothini kusasetshenziswa kakhulu, kungaba nobude obufushane noma obude bezinwele, buhlale buhlanzekile futhi bukanywe eceleni.
Yilokho kubukeka okuphambene nokuhlanya okusenza sihlubuke futhi sibe sesimanje. Kuyinkuthazo enkulu ngoba iyathanda ukuyenza ibe ngeyamanje, kepha akumele sikhohlwe ukuthi ungayigqoka futhi ihlehlisiwe. Uma wazi ukuthi uphatha kanjani lo mkhiqizo, uzohlala uchaza ukuthi ungawenza kanjani uphawule ubuntu bakho.
Yilelo gama esilisebenzisa namuhla nokuthi empeleni izinwele zezinwele. Lezi zinwele zihamba kahle nentshebe ezilungiswe kahle, ezinqunywe isikhathi eside. Isitayela sokusikwa se-Hipster sibonakala ngokuba sisikwe kahle emaceleni nasemuva, nezinwele ezinde ngemuva.
Kubonakala ngokugunda izinwele okufishane ezinhlangothini zekhanda nasemuva, futhi uma ubheka kahle asikho isidingo sokulungisa ingxenye yamathempeli ngoba ukubhinca eceleni kwabo akukho. Okuphezulu kungakhiwa ngendlela oyithandayo futhi njalo ngokusika okuhle.
I-Low Fade noma i-Mid Fade
Ziyizinwele ezimbili ezifanayo kakhulu, ku I-Low Fade sithola ukugunda izinwele kwanamuhla, nengxenye engenhla yakhelwe ukuba nezinwele ezinde ezincane futhi njengoba ukusika kuya phansi, kuyehla futhi kuqhubeke kuze kufike entanyeni.
Ngokusikwa kweMid Fade sithola uhlobo olufanayo lwekhanda, kepha ukwehla kokusika kwakho kuqala maphakathi nesikhumba. Izobukeka njengokugunda izinwele okungavamile kodwa kubukeka kahle futhi kunesithunzi.
Kwabesilisa abanezinwele ezisontekile kakhulu ungathola izinwele ezipholile kakhulu ukuze ukwazi ukuqonda leyo khanda kangcono kakhulu. Kuyisitayela esihlanganisa ngokuphelele cishe nazo zonke izinhlobo zokusikeka okuphathwayo. Ukuma kwayo kutholakala ngokushiya ingxenye engenhla yinde kancane futhi zonke izinhlangothi zigundwe impela, kuze kwenziwe nemininingwane emincane enezimo noma imigqa ngensingo.
Izinwele zezinwele ezisontekile
Le kwekhanda igqoke kabanzi kubantu abasha, njengoba bakwazi ukushiya yonke ingxenye esontekile ngaphezulu kwekhanda ngezinwele ezithile ezinde (isitayela se-hipster) nezinhlangothi zisikwe kahle kakhulu futhi zehliswa ngobude. Uma ungenazo izinwele ezisontekile futhi ufuna ukuzizuza, ungazenza ngokuthola imvume.
Uyasikhumbula isitayela sezinwele esithandwayo sika-Elvis Presley? Isitayela sakhe sinjalo ipompadour edumile ayigqoka phezulu yekhanda likame kakhulu emuva. Isimo sayo savela ngeminyaka yama-80s kodwa ngesitayela se-hipster futhi sayiqondisa kulo Pompadour kuzoba ukugunda izinwele kwanamuhla.
Lokhu kusikwa kungenye yezindlela ezihamba phambili, cishe ubude bezinwele abukho ngoba cishe bushiya izinwele zigundiwe. Izinwele zishiywa isikhashana nje ngaphezulu ekhanda futhi njengoba ubona ukuthi kukugunda izinwele okuhle kakhulu. Kuyikhanda elisebenzisekayo impela ngoba kungenzeka ukugqoka isitayela sezinwele esingathathi isikhathi eside ukuthi sinakekele kakhulu.
Ukwazi okwengeziwe mayelana nezinhlobo zezinwele ezimfushane zamadoda ungafaka isigaba sethu se izitayela zezinwele zalesi sitayela. Uma kunalokho ufuna ukugqoka izinwele ezinde futhi kukubhora ungazi ukuthi ungakugqoka kanjani, sinezitayela zezinwele ezihamba phambili zokwazi ukuthi singagqokwa kanjani. izinwele ezimfushane, eziphazamisekile nezithandwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izitayela zezinwele » Izinwele zezinwele zabafana besimanje
Isithambisi esihle kakhulu sabesilisa